Xanuunka Dhabarka (Xanuunka dhabarka)
Xanuunka dhabarka iyo xanuunka dhabarku waa wax xun! Dhabarka xanuunku wuxuu xitaa maalin cad oo qorrax leh ka dhigi karaa arrin calool xumo. Maqaalka, waxaan rabnaa inaan kaa caawino inaad saaxiibo dhabarkaaga mar labaad noqotid!
Halkan waxaad ka heli doontaa macluumaad wanaagsan oo kuu oggolaanaya inaad fahanto sababta xanuunka dhabarka kuu hayo iyo waxa aad ka qaban karto. Qeybta hoose ee maqaalka, waxaad sidoo kale ka heli doontaa layliyo (oo ay ku jiraan fiidyow) iyo waxa loogu yeero "tallaabooyin ba'an" haddii dhabarkaagu uu gebi ahaanba khaldamay. Xusuusnow inaad nala soo xiriirto Facebook haddii aad wax su'aalo ah ama ra'yi ah qabtid.
Maqaalkan waxaad ka aqrisan kartaa dhowr mawduuc oo ay ka mid yihiin:
Sababaha caadiga ah ee xanuunka dhabarka
Cudurrada macquulka ah ee xanuunka dhabarka
Calaamadaha caanka ah ee xanuunka dhabarka
Daaweynta xanuunka dhabarka
Jimicsiyada iyo tababarka
Su'aalaha badanaa la isweydiiyo ee ku saabsan dhibaatooyinka dhabarka
Is-daaweynta: Maxaan sameyn karaa xitaa xanuunka dhabarka?
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad sameyso marka aad xanuun dhabarka qabtid waa inaad dhaqdhaqaaqaaga sii waddo. Socodka oo ay weheliyaan jimicsi is-fudud ayaa kaa caawin kara inaad jilciso murqaha kacsan iyo kala-goysyada adag. Si kastaba ha noqotee, kugula talineyno inaad xanuunka la macaamisho muddo dheer, maadaama tani ay u horseedi karto labadaba dhibaatooyin iyo dhibaatooyin aad u adag. Raadso caawimaad xirfad-yaqaan (chiropractor ama physiotherapist) haddii aad leedahay xanuun dhabarka ah oo muddo dheer haya.
Tallaabooyinka kale ee lahaanshaha waxaa ka mid ah adeegsiga kubbadaha bartilmaameedka / duugista, tababar ku saabsan tababbarka xijaabka (horudhaca ka hortag), qaboojinta kareemka muruqyada (tusaale. Biyo qabe) ama isticmaalka isku darka kuleylka / xirmada qabow. Waxa ugu muhiimsan waa inaad xanuunka si dhab ah u qaadatid oo aad wax ka qabatid.
Sidoo kale aqri: - Jimicsiyadan Waxaad U Baahan Tahay Inaad Ku Ogaato Xanuunka Xanuunka daran ee daran
Saameynta Xanuunka dhabarka Dhamaan 80% shacabka Noorweey
Dhabar xanuunka waa cilad ku dhacda ilaa 80% dadka reer Norway. Muddo sanad ah, qiyaastii kalabarkeenu waxaan soo marnay dhacdooyin xanuun dhabarka ah, qiyaastii 15% waxay qabaan xanuun dhabarka ah oo daba dheeraada. Tani waa cilad leh kharash badan oo dhaqan-dhaqaale ah oo Norway - haddaba maxaa diidaya inaad xoogga saartid tallaabooyinka ka hortagga ah?
Sababaha Ugu Caansan ee Xanuunka dhabarka
Sababaha ugu badan ee xanuunka dhabarka waa sababta oo ah muruqyada ciriiriga ah (ciribta) iyo kala goysyada dhaqdhaqaaqa hooseeya (qufulka). Marka cilladdu aad u weynaato waxay ku dambayn doontaa xanuun iyo xanuun, iyo sidoo kale xanaaqa dareemayaasha dhow. Waxaan soo koobeynaa seddex sababa oo waaweyn:
Fududeyn la'aanta Joint
Waad ka fikiri kartaa inuu yahay marsho aan ku wareegeynin dhisme farsamo - waxay beddeli doontaa sida aad u shaqeyso sidaas awgeedna waxay ku imaaneysaa dhaawac farsamada. Tan awgeed, waa muhiim in la daweeyo muruqyada iyo kala-goysyada labadaba marka la shaqeynayo yareynta xanuunka dhabarka.
Baadhitaanada Macquulka Ah ee Ku Dhajin Karka Xanuunka
Liiska hoose, waxaan soo maray dhowr baaritaan oo kala duwan oo sababi kara xanuunka dhabarka. Qaarkood waa baaritaanno shaqeynaya kuwa kalena qaab ahaan.
Dhabarka toosan (murqaha dhabarka) barta kicinta
Gluteus medius myalgia / dhibcaha kiciya (muruqyada kuruga oo ciriiri ah ayaa gacan ka geysan kara xanuunka dhabarka)
labiska Joint dhabarka hoose, xabadka, feeraha iyo / ama kala dhexeeya garbaha (interscapular)
kuus kuus muruqa / myalgia dhabarka:
Qodobbada kicinta firfircoon xanuunka oo dhan marwalba xanuunka ayey u horseedi doontaa (tusaale. quadratus lumborum / dhabarka fidinta myalgia)
Soo noqoshada dhabarka hoose
qalooca (sababtuna tahay murgacashada laf dhabarta, muruqyada iyo cillad wadajirka ah ayaa laga yaabaa in la rakibo)
Stenosis laf-dhabarka ee dhabarka hoose
Markaa, marka la soo koobo, waxaa jira dhowr sababood oo suurtagal ah iyo baaritaanno la xiriira xanuunka dhabarkaaga. Kuwa ugu caansan waxaa sabab u ah murqaha murqaha, kala goysyada kala goysya iyo xanaaqa dareemayaasha. La xiriir chiropractor ama jimicsiga jimicsiga si aad u baarto xanuunka dhabarkaaga haddii aysan keligood tegin.
Su'aalaha badanaa la isweydiiyo ee ku saabsan astaamaha xanuunka dhabarka
Qaar badan oo ka mid ah akhristayaasheena ayaa na weydiiyay su'aalo ku saabsan xanuunka dhabarka sannadihii la soo dhaafay - waxaanan ku dadaalnay intii ugu wanaagsan ee aan uga jawaabi lahayn. Liistada hoose waxaad ku arki kartaa qaar ka mid ah astaamaha ay dadku kala kulmaan xanuunka dhabarka iyo arrimo murugsan.
Xanuunka dhabarka caloosha awgeed
Dumar badan ayaa la kulma xanuun dhabarka iyo caloosha ah waqtiga caadada. Xanuunadan ayaa inta badan isku-wareegi kara oo ka dhigi kara raaxo-darrida mid aad u daran. Tan waxaa ugu horeyn sababa isbedelada hoormoonka iyo murqaha murqaha.
Iskuday inaad heshid boosaska nasashada - jagooyinka xaaladaha degdegga ah - tusaale ahaan adigoo jiifa oo aad lugahaaga saareyso kursiga dushiisa. Ama dhinaca oo lugahaaga xaggaaga kor loogu soo qaado xagga uurjiifka - iyo barkin jilbahaaga u dhexeeya. Meelahan, waxaa jiri doona cadaadiska ugu yar ee suurtogalka ah ee dhabarka iyo caloosha.
Xanuunka dhabarka murugada
Dad badani waxay la kulmaan xiriir dhow oo u dhexeeya culeyska iyo xanuunka dhabarka. Tani waa sababta oo ah walwalku wuxuu gacan ka geysan karaa murqaha kacsan taas oo iyana horseedi karta dhabarka, qoorta ama xitaa madax xanuun. Jimicsiyada saxda ah, jimicsiga jireed, yoga iyo iskalaalinta ayaa dhammaantood ah dawooyin waxtar u leh murqaha la xiriira walaaca iyo dhibaatooyinka lafaha.
Xanuunka dhabarka dambe ee Tempur
Dad badan ayaa niyad jabsan markay iibsadeen barkin timir qaali ah ama furaash duufaan leh - oo kaliya inay la kulmaan in xanuunka uusan ka soo raynayn, laakiin uu ka sii darayo. Tani waa sababta oo ah furaashyada tempur-ka iyo barkimooyinka ku-meel-gaarka ah ayaan ku habboonayn dhabarka iyo qoorta oo dhan. Xaqiiqdii, waxaad halis ugu jirtaa inaad jiifto meel xiran habeenkii oo dhan, taas oo iyaduna keenta culeys joogto ah aag gaar ah - tani waxay ka dhigan tahay in aaggan uusan helin soo kabsashadii uu u baahnaa, taasoo iyaduna u horseedi karta dhabar xanuun. Cilmi baaris ayaa sidoo kale muujisay taas Tirtirka barkinta ma ahan waxa ugu fiican ee aad ku seexan karto qoorta xanuun - iyo inaad dhab ahaantii iska ilaalin karto qoorta oo xanuun iyo madax xanuun adoo barkin baddalinaya
Xanuunka Dhabarka ee Jooga Waqti Dheer
Waalidiin badan ayaa xanuunka dhabarka ah kala kulma marka ay dhinac istaagaan oo ay daawadaan carruurtooda oo ciyaareysa kubbadda cagta. In aad istaagto hoos iyo hoosba muddo dheer ayaa culeys dhinac kaliya ah saaraysa dhabarka, si la mid ah boosaska fadhiga, aakhirka waxay ku bilaaban kartaa xanuun muruqyada waxaadna dareemaysaa qallafsanaan iyo qallafsanaan. Tani waxay muujin kartaa muruqyada asaasiga ah ee aan fiicnayn - gaar ahaan muruqyada dhabarka qoto dheer - ama cillad la'aanta xubnaha iyo murqaha.
Xanuun dhabarka ka dib jimicsiga
Mararka qaar nasiib uma yeelan kartid tababarka - xitaa haddii aad adigu laftaadu dareentay inaad leedahay farsamo wanaagsan inta aad dhammaan jimicsiga sameyneyso. Nasiib darrose, inta lagu guda jiro tababarka, nasiib darro xamuul khaldan ama culeys xad dhaaf ah ayaa dhici kara. Tani waxay ku dhici kartaa kuwa ugu tababaran iyo sidoo kale kuwa hadda tababarka bilaabay. Muruqyada iyo kala-goysyada waxay sababi karaan xanuun haddii ay dareemaan inaad khatar ugu jirto iyaga si uun. Dhakhaatiirta jimicsiga jirka iyo lafopractor waxay si gaar ah u arkaan dadka naftooda ku qaaday waxyaabo kor u qaada ama jilbaha kor u qaada, maxaa yeelay kuwani waxay u baahan yihiin oo kaliya in yar oo ka weecasho farsamada caadiga ah ee xanuunka ku siineysa. Tilmaanta jimicsiga, ka naso jimicsiyada la soo bandhigay iyo daaweynta ayaa ah dhammaan tallaabooyinka ku caawin kara.
Xanuun dhabarkayga ah markaan ku sii jeedo
Si nadiif ah oo farsamo ahaan ah, waa xiisadaha gadaal iyo kala-goysyada hoose ee ku lug leh foorarida hore. Marka waxay ku tilmaami kartaa cillad xagga hoose ee dhabarka ah - isla waqtigaas waxay sidoo kale ku dhici kartaa cuncunka neerfaha ama soo noqoshada.
Xanuunka dhabarka markaan xanuunsado
Dad badan ayaa la kulma in xanuunka dhabarku ka sii daro markay xanuunsadaan. Sida dad badani ogyihiin, fayraska, oo ay ku jiraan hargabka, waxay sababi karaan kala-goysyada iyo murqaha xannuun ku faafa jirka oo dhan. Naso, biyo dheeraad ah iyo fitamiin C ayaa ka mid ah talaabooyinka ku caawin kara.
Xanuun dhabarkayga ah markaan boodo
Boodhku waa jimicsi qarxa oo u baahan is-dhexgalka muruqyada iyo kala-goysyada. Xakameynta myalgia iyo xayiraadda wadajirka ah waxay noqon kartaa xanuun. Haddii xanuunku keliya dhacayo markii aad degtid, waxay kuu muujin kartaa inaad ku leedahay xanaaqa isku buuqidda dhabarka hoose.
Dhabar xanuun Markaan Jiifsado
Qaybtan, qaar badan oo leh xaammilnimo socda ama hore ayaa iyagu is aqoonsan doona. Dhaawac dhabarka ah markaad jiifto ayaa badanaa lala xiriiriyaa kala goysyada miskaha.
Haddii aad leedahay xanuun dhabarka hoose marka aad jiifto tani waxay muujin kartaa Cilladaha miskaha, badiyaa lagu daro lumbar iyo gluteal myalgias. Gaar ahaan Uurkuhu wuxuu kordhiyay dhacdada xanuunka dhabarka Markaad jiifto, tani badanaa waxay la xiriirtaa miskaha oo hoos loo dhigo iyo dhabarka hoose ee shaqada.
Xanuun dhabarkayga ah markii aan neefsado
Markaan neefsanno, xabadka ayaa ballaaranaya - kala-goysyada dhabarka ayaa dhaqaaqa. Ku xirida feeraha lifaaqan ayaa badanaa sabab u ah xanuunka neefsashada farsamada.
Xanuunka dhabarka markii neefsashada la sababi karo feeraha oo aan shaqeynin oo lagu daro xiisadda murqaha murqaha feeraha iyo garbaha gudaha. Noocyadan xanuunku waxay badanaa ka dhacaan laabta / dhexda dhabarka waxayna u muuqdaan inay keenaan xanuun fiiqan iyo mindiyo.
Xanuun dhabarkayga ah markaan fadhiisto
Fadhiga ayaa culeys aad u sarreeya saaraya dhabarka hoose. Joogitaanka fadhiga wuxuu ka mid yahay cadaadiska ugu sarreeya ee aad ku gaari kartid dhabarka hoose - tani waqti dheer ayey ka xanaajin kartaa labada kala-goys, muruqyada, saxannada iyo neerfaha.
Haddii aad leedahay shaqo xafiis, waxaa lagugula talinayaa inaad qaadato dhowr jeer oo biririf yar inta lagu jiro maalinta shaqada si aad uga saarto cadaadiska dhabarkaaga iyo qoorta - iyo inaad si firfircoon ula shaqeysid layliyo jilicsan waqtiga firaaqadaada.
Xanuunka dhabarka inta lagu jiro naasnuujinta
Naasnuujintu way ku adag tahay dhabarka. Naasnuujinta waxaa lagu sameeyaa xaalad taagan oo culeys saareysa meelaha qaarkood ee dhabarka. Gaar ahaan laf-dhabarka, qoorta iyo inta u dhexeysa garbaha garbaha ayaa ah aagag xanuun leh marka naasnuujinta - waxayna siinayaan dabeecad qoto dheer, gubasho iyo xanuun xanuun leh.
Naasnuujintu sidoo kale waxaa loo sameeyaa si joogto ah si culeyska aagga u kordho oo u kordho, iyada oo aan la siin magdhow ku filan muruqyada iyo kala goysyada. Jimicsiyada saxda ah, jimicsiga jirka, naas nuujinta iyo iskala bixinta ayaa dhamaantood noqon kara talaabooyin wax tar leh.
Xanuunka dhabarka iyo meelaha kale
Dad badan ayaa sidoo kale la kulma marka lagu daro xanuunka dhabarka, waxay sidoo kale ku xanuunsadaan meelo kale oo jirka ah - qaar ka mid ah kuwa ugu caansan waxaa ka mid ah:
Xanuunka dhabarka iyo lugaha
Xanuun dhabarka iyo miskaha ah
Xanuunka dhabarka iyo gumaarka
Xanuun dhabarka iyo lugta ah
Xanuun dhabarka iyo bowdada
Xanuun dhabarka iyo muruqyada kursiga
Xanuunka dhabarka badanaa waa loo gudbin karaa haddii ay sidoo kale jiraan cuncun neerfaha - taas oo ku dhici karta dhaawacyada maqaarka awgiis (kala-baxa maqaarka ama dib-u-dhaca) ama cillad la'aanta muruqyada iyo kala-goysyada.
Waxaan kugula talineynaa inaad raadsato baaritaan caafimaad iyo daaweyn xanuunka dhabarkaaga oo keliya xirfad yaqaan caafimaad guud oo khibrad u leh murqaha iyo xanuunka laabatada. Tani waa sababta oo ah xirfadahan waxay ku xiran yihiin HELFO sidaa darteedna xirfadaha ayaa loo ilaaliyaa cinwaanka, iyo in shuruudaha waxbarashada iyo kartida lagu maamulo sharciga.
Saddexda xirfadood ee shatiga shatiga u leh dadweynaha waa chiropractor, physiotherapist iyo therapist the manual. Xirfadahaani waxay ugu horayn ka hadlayaan dhibaatooyinka muruqyada iyo farsamooyinka daaweynta ee soo socda:
Farsamooyinka xiisadda neerfaha
Daaweynta unugyada Tendon
Jimicsiyada iyo Tilmaanta Tababarka
Farsamooyinka kale ee la adeegsado, waxay kuxirantahay khibradda qofka, waxaa ku jiri kara:
Acupuncture-ga loo yaqaan 'Intramuscular Acupuncture'
Daaweynta Laydhka Musqusha
Raadi rug caafimaad
Ma u baahan tahay caawimaad sidii aad ku heli lahayd dhakhtar kugula taliya meesha kuugu dhow? Nala soo xiriir annaguna waxaan ku dadaalnaa sidii aan kuu caawin lahayn.
[button id = »» style = »buuxa-yar» class = »» align = »center» link = »https://www.vondt.net/vondtklinikkene/» linkTarget = »_ self» bgColor = »accent2 ″ hover_color = »Accent1 ″ font =» 24 ″ icon = »location1 ″ icon_placement =» bidix »icon_color =» »] Hel Maareeye [/ button]
Jimicsiyada iyo tababarka ka soo horjeedka Xanuunka dhabarka
Cilmi baaris ayaa ku tiri - qof kasta oo aad taqaanid ayaa leh. Jimicsiga iyo jimicsiga ayaa u fiican dhabarkaaga. Laakiin mararka qaarkood way adkaan kartaa in lala dagaallamo masaafada sare - dhammaantayo waan ognahay taas.
Xaqiiqdu waxay tahay, si kastaba ha noqotee, jimicsiga iyo jimicsiga waxay leeyihiin faa'iidooyin weyn xagga yareynta xanuunka dhabarka iyo hagaajinta shaqadaada. Miyay ku fiicnaan laheyd xanuunka dhabarka yar? booqasho Channelkeena Youtube (halkaan riix) oo arag dhammaan barnaamijyada tababbarka bilaashka ah ee aan ku bixinno halkaas. Sida fiidiyowgan tababarka ah ee ka dhanka ah muruqyada dhabarka adag.
VIDEO: 5 Jimicsi oo ka dhan ah Muruqyada Dhabarka Timaha
Fiidiyowga kore waxaad ku arki kartaa shan jimicsi oo wanaagsan chiropractor Alexander Andorff taas oo kaa caawin karta yareynta xanuunka dhabarkaaga. Xor ayaad u tahay inaad iska diiwaangeliso kanaalkeena YouTube (iskuxiradu waxay ka furmeysaa daaqad cusub) barnaamijyo jimicsi oo dheeraad ah oo sidan oo kale ah.
Guudmarka - Jimicsi iyo jimicsi loogu talagalay xanuunka dhabarka iyo xanuunka dhabarka
5 Jimicsiyada Wanaagsan ee Ka Soo Horjeeda Sciatica
5 Jimicsiyada Yoga ee Ka soo Horjeeda Dhalitaanka
6 Layliyo loogu talagalay Xanuunka Dhabarka ee Hoose ee Aad u Xun
Talo-siinta Rabshadaha ka dhanka ah Xanuunka dhabarka
Dhamaadka ka soo horjeedka waxa aan u taaganahay - daaweynta iyo talo-siinta ku saleysan cilmi-baarista - waxaan ka helaynaa talooyinkii dumarka duugga ahaa. Qaarkood waxay hoosta ka xariiqeen waxyaabo ku caawin kara, laakiin sidoo kale waxyaabo waalan oo waalan.
Badanaa waxaa naloo soo diraa waxa loogu yeero talobixinta dumarka da'da ah ee ku saabsan waxa ka caawin kara noocyada kala duwan ee xanuunka iyo cudurada. Qaar badan oo ka mid ah maqaaladeena, waxaan dooranay inaan ku daabacno qaar iyaga ka mid ah, oo leh cod qosol leh, waxaanna weydiisaneynaa in kuwan aan si dhab ah loo tixgelin - laakiin waxay doorbidayaan inay kaa siiyaan qosol wanaagsan halka aad la fariisato oo leh dhabar xanuun.
Daawooyinka: Basasha xanuunka Xanuunka dhabarka
Goluhu wuxuu u socdaa sidan soo socota. Waxaad u kala jeexday basal cayriin qeybtii ka hor inta aadan nuujin qeyb ka mid ah qeybta xanuunka ee dhabarka. Waxaa la sheeganayaa in casiirka basasha laftiisu uu ka shaqeynayo xanuun-yareeye. Dhanka kale, waxaan aad uga walaacsanahay oo waxaan u maleyn karnaa inay tani kaliya ku siinayso xanuun joogto ah oo urinaya basasha cayriin. Farxad.
Talada kalkaalisada: Xanuunka dhabarka ee xanuunka dhabarka
Haa, waad aqrisay xaqaas. Mid ka mid ah talooyinka ugu doqonsan ee naloo soo diray ayaa ah inaan karkarino gogo 'kudhista (oo la doorbidayo qudhaanjada dhimatay sida soo gudbiyaha u qoray…) iyo biyo. Kala-soocidda ayaa markaa lagu dhejiyaa dhabarka. Fadlan, sidan ha sameyn.
Daawooyinka: Boorso caag ah oo loogu talagalay xanuunka dhabarka
Waxaa laga yaabaa inaad u maleysay in balaastiggu ahaa belaayo iyo dhibaato ku haysa dabeecadeena? Hagaag, maahan sida uu sheegayo gudbiyuhu. Wuxuu aaminsan yahay inay tahay dawada xanuunka dhabarka. Iska ilow daaweyn jireed - hel bac balaastig ah (akhri: daawo mucjiso u ah dhabar xanuunka) ka dibna si toos ah ugu dheji maqaarka halka xanuunku yaalo.
Soo gudbiyihii ayaa markaa ka dib sheegay inuu dhidid ku hayo aagga - iyo inuu xanuunka u dhididaayo waqti ka dib. Fursaddu waxay u badan tahay inay ka sii weyn tahay sababta xanuunka, laga yaabee murqaha murqaha, inay iskeed isu dejiso. Laakiin waanu qadarinaynaa caqliga.
NHI - Xogta Caafimaadka ee Norway.
Agaasinka Caafimaadka. Samafalka wuxuu ka helaa firfircoonaanta jirka. web: http://helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/velferdsgevinst-av-fysisk-aktivitet.aspx
XAGGA Maqnaanshaha xanuunka 2011. Web: http://www.nho.no/getfile.php/bilder/RootNY/filer_og_vedlegg1/Kostnader%20sykefrav%C3%A6r%202011%20siste.pdf
Su'aalaha badanaa la isweydiiyo ee ku saabsan Xanuunka dhabarka:
Dhabarka ma ku heli kartaa dhabarka?
turqo waxay ku dhacdaa marar dhif ah dhabarka. Waxaa jiray kiisas go'doon ah halkaas oo lagu arkay in kristantarrada uric acid ay keeneen lumbar stenosis, laakiin sidaan idhi, tani waa mid aad u yar. 50% gout waxay ku dhacdaa suulka weyn. Kadib ciribta, jilbaha, faraha iyo curcuradu waxay ku socdaan 'caadi'. Sidaan soo sheegnay, waa dhif iyo naadir in turqo dhabarka ka dhacdo. Laakiin gout waxay saldhig u noqon kartaa kobcinta dhagaxa kalyaha - taasoo sababi karta dhabar xanuun fiiqan, oo aad u daran.
Duubista xumbo ma iiga caawin kartaa dhabarkayga?
Jawaab: Haa, xarkaha barar / xumbada xumbo ayaa kaa caawin kara qayb ahaan, laakiin haddii aad dhibaato ku qabto dhabarkaaga, waxaan kugula talineynaa inaad la xiriirto xirfadle daryeel caafimaad oo ku takhasusay cilmiga muruqyada isla markaana aad heshid qorshe daaweyn oo aqoon leh oo leh laylisyo gaar ah oo gaar ah.
Wuxuu lahaa kala-bixin dhabarka ah iminkana way xanuunaysaa neefsashada. Maxay noqon kartaa
Waxay u egtahay inaad sharaxeysid waxa loo yaqaan feeraha feeraha - tani waa marka kala-goysyada wejiga 'vertebrae' qufulka 'oo lagu daro lifaaqyada feeraha (kala-goysyada qiimaha leh). Tani waxay u dhici kartaa si lama filaan ah waxayna ku keeni kartaa xanuun gudaha garbaha garbaha taas oo ay sii xumeyneyso wareegga jirka sare iyo neefsashada qoto dheer. Badanaa, daaweynta wadajirka ah oo ay weheliso shaqada muruqyada ee lafopractor ama daaweeyaha gacanta ayaa bixin kara calaamado deg deg ah iyo hagaajin shaqeyn. Haddii kale waxaa lagugula talinayaa inaad socotid oo aad ku sii socotid waxa aad awoodid.
Uu shucaac hoos u leeyahay lugaha ka dib dhicitaan xagga dambe ah. Sababta
Shucaac iyo hoos u garaacista lugaha waxay kaliya ka imaan kartaa xanaaq / qanjaruufo ku dhaca dareemaha nafsadda, laakiin waxaa jiri kara sababo kala duwan oo qofku u dareemayo xanuun dareemayaasha lugaha. Waxay sababi kartaa lumbar prolapse / lumbar prolapse / disc disease oo cadaadis saaraya xididada dareemayaasha (kuwaas oo hoos u dhigaya lugaha - sidoo kale waxa loogu yeero dermatomes) - ama waxay sababi kartaa muruqyada oo la adkeeyo (tusaale, piriformis syndrome) oo cadaadiska saaraya neerfaha. Haddii aad shucaac ku aragto labada lugood, nasiib daro waxaa looga shakisan yahay in cuncunka / qanjaruuxu uu yahay udub dhexaad / dhexe, mid ka mid ah sababaha ugu badan ee tan loo yaqaanna waa isbadal ku yimaada maqaarka dhexe oo cadaadis ku haya labada xidid ee dareemayaasha (sidaa awgeed shucaaca labada lugood). Waxaan kugula talineynaa inaad la tashato dhakhtar isla markaana aad ogaato dhaawaca.
Dhaawac ka soo gaadhay dhabarka dambe. Waa maxay qaybta dambe ee dhabarka?
Xanuunka qaybta dhexe ama qaybta dhexe ee dhabarku waa isku mid xanuun laabta ah. Press iyada si aad wax dheeraad ah uga sii akhriso.
Maxaad xanuunka ugu soo noqdaa?
Jawaab: Xanuunku waa habka jidhku u yiraahdo waxbaa qaldan. Sidaa darteed, calaamadaha xanuunka waa in loo turjumaa macno ahaan in uu jiro qaab cillad la'aan ah oo ka jirta aagga ay khusayso, taas oo ah in la baaro lana sii wado daaweynta saxda ah iyo jimicsiga. Sababaha xanuunka dhabarka waxaa u sababi kara shil kadis ah ama tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah, qallafsanaan wadajir ah, xanaaqa neerfaha iyo, haddii ay wax sii socdaan meel ku filan, firiiric cillad (sciatica)
Maxaa lagu sameeyaa dhabar xanuun badan oo murqaha garaaca?
Jawaab: kuus kuus muruqa Waxay u badan tahay inay ka dhasheen muruqyada oo si khaldan loo qoro ama si qaldan loo sheego. Waxaa sidoo kale jiri kara xiisad murqaha la xiriirta oo ku saabsan kala-goysyada wajiga ee ku dhaca laf-dhabarka iyo kala-goysyada. Bilowgii, waa inaad heshaa daaweyn aqoon leh, ka dibna helaa jimicsi gaar ah si uusan u noqon dhibaato soo noqnoqota nolosha dambe.
||| Su'aalaha la xiriira oo leh jawaab isku mid ah: «Wuxuu ka helay guntimaha muruqa dhinaca dambe ee hoose. Maxaan sameeyaa? ”
Maxaan ugu xanuunsanayaa dhabarka hoose?
Jawaab: Qeybta hoose ee dhabarka waxaan ka aragnaa vertebrae L5-S1, tani waxay noqoneysaa aag nugul haddii aadan laheyn murqaha udub dhexaadka ah ama haddii aad walwal badan culeys kala kulanto nolol maalmeedka. Sababaha xannuunka waxaa ka mid ah, waxyaabo kale, xanuunka dhabarka, murqaha murqaha, sababaha saxda ah ama xanaaqa.
Mararka qaarkood dhabarka gadaal ka riix dhawaaq. Maxay noqon kartaa?
Dhagsinta codka ama daloolka dhabarka waxay u sabab tahay dhaqdhaqaaqa / cadaadiska isbeddelka ku dhaca kala-goysyada wejiga (qodobbada isku xidhka ee u dhexeeya laabatooyinka dhabarka) - kuwani waxay sameyn karaan dhawaaqyo haddii cillad ka jirto aagga oo u baahan xoogaa fiiro gaar ah. Badanaa waxay u sabab tahay muruqyada taageerada ee aad u yar ee aagga oo ay weheliso waxa loo yaqaan 'qufulo wadajirka' (oo loo yaqaan 'qufulo') - waxaan kugula talineynaa inaad caawimaad ka hesho dhibaatooyinka wadajirka ah ee loo yaqaan 'chiropractor' ama 'therapist' ka dibna aad hesho hagitaan tababar / jimicsi gaar ah si loo xoojiyo aagagga u baahan kordhinta taageerada / xoogga.
Dhabarka ayaa i dhaawacay markii aan aad u shaqeeyo. Maxaan u dhaawacaa dhabarka markaan shaqeynayo?
Waxaad kaga jawaabeysaa su'aashaada adoo sheegaya inaad adigu culeys xad dhaaf ah iska saareyso - adigoon haysan awood kugu filan oo aad ku sameyso Laba talo oo ku saabsan xalka:
Haddii aad haysato shaqo xafiis rasmi ah, markaa waa inaad si firfircoon isugu daydaa inaad xaddiddo waqtiga aad shaqeyso inta lagu jiro maalinta shaqada. Qaado socod yar oo joogto ah inta lagu jiro maalinta shaqada sidoo kale samee jimicsi fudud.
Haddii aad qabtid shaqo culus oo ku lug leh kor u qaadis iyo wareejin badan, markaa waa inaad ogaataa in tani ay kuu horseedi doonto dhaawacyo culeys ah haddii aadan haysan awood kugu filan oo aad ku shaqeyso muruqyada iyo kala-goysyada si aad taas u sameyso. Tani waa wax inta badan ku dhaca kalkaaliyaasha caafimaadka iyo kalkaaliyayaasha guriga maxaa yeelay had iyo jeer waa inay qaadaan wax kadis deg deg ah ama ka shaqeeyaan boosaska aan fiicneyn ee dysergonomic.
Jørgine Liasen wuxuu leeyahay,
1 bil gudaheed waxa aan yeelan doonaa balan qaliinka dhabarka 6aad ee Ullevål. Farxad iyo naxdin. Anigoo rajaynaya inaan ka takhaluso rajada qaar ka mid ah xanuunka maanta i haya si aan u yareeyo heshiis wanaagsan oo ku saabsan xanuunka baabi'iyaha. Oo waxaan rajaynaynaa in ay awoodaan in ay xoogaa socdaan mar kale oo aan ugu yaraan dabaalan doonaa. (haa, aad baan u taxaddari doonaa…)
Kadib waxaan ka baqayaa maalmaha qaliinka ka dib, si aan u soo kaco sababtoo ah waxaan ogahay in ay xanuunayso cirka bilawga… Kadibna dabcan waxaan u maleynayaa in tani ay dhab ahaantii tahay markii 6-aad… saadaasha ayaa ka sii daran mar kasta, iyo sababtoo ah waxaan ahay mid aad u nasiib badan. in wax cusub ay mar walba dhabarka ka dhacaan.
Goorma ayay istaagtaa?
jorun h. wuxuu leeyahay,
hi jørgine, sidoo kale waxaan la halgamayaa xanuunka joogtada ah… nasiib wacan nidaamkaaga !! Waxaan rajeynayaa inay si fiican u socoto! Waxaan rajeynayaa in xanuunku uu joogsan doono ka dib qalliinka lixaad, laakiin marnaba ma hubin kartid .. waxaa jiri doona unug nabar ah oo aad u badan iyo unug dhaawac leh oo leh qalliinnadaas atte '.
Hi hadda waxaan isticmaalayay Cymbalta 30 mg muddo 4 maalmood ah. Wuxuu wacay dhakhtarkayga wuxuuna igu yidhi waa inaan kordhiyo 60 mg berrito… Xanuunkaygu waa dhabarka iyo murqo xanuunka caloosha sababtoo ah dhabarka. Marka aan dhabarka u seexdona waxa i xanuunaya laabta iyo caloosha oo dhan ilaa gumaarka. Ma jiraa qof khibrad u leh Cymbalta xanuunka dhabarka?
Mette Gundersen wuxuu leeyahay,
Hi! Ma la yaabban tahay haddii qof halkan jooga uu ka degay kaydka palexia?
Waa inaan joojiyo qaadashada kaniiniyadan, ma aha sababtoo ah ma bixiyaan xanuun baabi'in ku filan, laakiin sababtoo ah dhibaatooyinka soo raaca. Waxaan u dhididsanaa sida biyo-dhacyada oo kale ama baraf baraf baan ka dhigaa kala badh ilaa dhimasho marka jidhkaygu gaadho heer kulka caadiga ah. Waxaan ku socdaa qiyaasta sare ee macquulka ah, 500 mg, laakiin hadda waxay usbuucii la soo dhaafay hoos ugu dhacday 400 mg.
Dhakhtarkaygu wuxuu qabaa 14 maalmood ka dib inaan hoos u dhigo 100 mg oo dheeraad ah oo aan sii wado, ilaa aan ka gaarayo 0. Waxaan qabaa xanuun aad u xun iyo casiraad, dhabarka ayaa gabi ahaanba maqan, cagahayga lugta bidixna si dhib leh uma socon karo. Xanuunka oo dhan wuxuu ka yimaadaa qaliin dhabarka ah oo fashilmay (waan ka qoomameynayaa!).
Waxaan u maleynayaa in hoos u dhigiddu ay aad u dhaqso badan tahay, qof kastaa wuxuu leeyahay khibrad ??
Waad ku mahadsan tahay jawaabta iyo haddii kale waxaan jeclaan lahaa in aan kuu rajeeyo maalin wanaagsan oo aan rajeynayo in aysan ahayn mid aad u xanuun badan ...
Hais Draxen Jordhøy wuxuu leeyahay,
Waxaan xoogaa quus ka taaganahay in la iga caawiyo helida ogaanshaha cudurka. Qofna waxba ma ogaanayo. Taasna waxay la macno tahay in aanan dhalin naafo...
Waxa aan ku dhaawacmay shil baabuur aniga oo 18 jir ah, halkaas oo aan ku dhacay soo dhac madaxana si fiican uga dhacay. Waxa la iga qalay 6 bilood ka dib soo-dhac, halkaas oo dhaawac dareeme ah uu iga soo gaadhay dhabarka hoose. Waxay ka dhigtaa inay ku xanuunto maalin kasta hoos lugaha (inta badan lugta midig) nooca tolida iwm. Mararka qaarkood waan kacaa oo waxaan kor u kacaa lugaha gebi ahaanba curyaan. Mararka qaarkood hal lug, marar kalena labadaba. Kadib waxay curyaan yihiin ilaa 40 saacadood / taasi waa diiwaanka ilaa hadda).
2005tii waxaan bilaabay inaan suuxo. Waxay ahayd meel kasta iyo wakhti kasta. Wax shaqo ah kuma lahayn inaan dhaqso u kaco, ama sida aan u daalay (inkasta oo ay marar badan dhacdo markaas). Waxaan qabaa miyir beel joogto ah sababtoo ah. Ma garanayno sababta ay tani u dhacayso. Waxay qaadeen baaritaanno suuxdin, laakiin waxba ma helin (waxay markaa yiraahdeen macnaheedu maaha inaanan qabo, kaliya ma dhicin inta lagu jiro baaritaanka. Waxaan mararka qaarkood soo saari karaa, halkaas oo aan markaas ma xasuusto mid ka mid ah waxa Waxay dhacday ka hor intaanan xukunkayga dhameysan, gabi ahaanba waa yaab.
Haddii aadan mid ka mid ah kuwan fahmin, si fiican ayaan u fahmay, laakiin waxaa laga yaabaa inaad taqaan qof aan la xiriiri karo. Waxa kale oo aan sheegi karaa in aan iibsaday nidaamka Redcord oo aan ku tababaro. (inkasta oo aan ku yara xumaanayo, sida aan ogahay aad baan u xanuunsanahay)
Waxay u egtahay mid aad iyo aad u daal badan oo niyad jab leh. Ka warran karbaash? Waa qasab inay ku dhacday shil baabuur oo rabshado wata? Mise waxa aan diiradda la saarin? waxaa la og yahay in tani ay horseedi karto tiro dhaawacyo dambe oo 'ku dhawaad ​​aan la arki karin'.
haisjo wuxuu leeyahay,
Hagaag, anigu qoor kuma hayo haba yaraatee, laakiin waxaan xusuustaa koofiyad cidhiidhi ah oo daaqadda dhinaca ku taal. Ilaa hadda diiradda laguma hayo. Dhabarka ayaan si xoog leh u maroojiyey shilka, laakiin hadda ma qabo soo noqosho (mid cusub ayaa qalliinka ka dib helay, laakiin wuu yaraaday). Bilaabida in aad ka baxdo fursadaha. Hehe.
Oo waxay u badan tahay inaad tijaabisay badi daawaynta iyo daawaynta? Hadday sidaas tahay, xor u noqo inaad taxdo waxaad isku dayday iyo saamaynta ay ku yeelatay.
Waxaan qaaday tijaabo farabadan, laakiin ma heli karo physio oo ma awoodo nafteyda. Hadda waxaan ku socdaa isku dar ah od tramagetic od, nerontine, meloxicam, maxalt iyo marmar solpedeine (kaniini effervescent Ingiriisi ah). Ka dambe wuxuu qaataa wax walba, diyaarinta codeine.
Waxa lagaa baadhay wadnaha, baadhitaanada suuxdinta, mudane…. Mah! Waxaan aaday bogaga kaynta iyo fayoqabka waxaanan la hadlay rugta xanuunka ee Hønefoss. Qofna ma haysto wax fikrad ah sababta aan u suuxo iwm. Haddaba hadda daawadu waa noloshayda.
Uff! : / Si fiican uma eka. Laakin kuma helaysid physio-ga deeqaha hawlgelinta guud, sidoo kale?
Maya, nasiib daro waxba ma daboolo. Hagaag, markii ugu dambeysay ee aan codsado, waa la i diiday. Hadda waxay ahayd muddo.
Hagaag, waxaa laga yaabaa inay caadi tahay inaad mar kale halkaas ka hubiso GP-gaaga. Sida la wada ogsoon yahay, waxaa jira natiijooyin gaar ah oo ku saabsan raajada iyo wixii la mid ah oo kuu qalmi kara qiimo dhimis.
Bjørg wuxuu leeyahay,
Hello. Ka dib 15 sano oo leh dhibaatooyin cagaha dhabarka iyo bidixda, waxaan qalay 4 sano ka hor. Sanad ka dib waxaa la igu sameeyay qalliin cusub, markaas waa la i adkeeyey. Hadda waa naafo oo weli waxaan haystaa dhibaatooyin cagaha iyo dhabarka ah. Cagtu waa caajis, jidhidhico, waxay ku nooshahay gudaha cagta, xanuun, qallafsanaan iyo dhaqdhaqaaq yar oo ku wareegsan canqowga. Dhabarku waa i dareemaa oo si degdeg ah ayaan u daalaa. Dhibaatooyinka qaarkood ee dhinaca midig ee dhabarka iyo hoos bowdada. Joogista iyo fadhida wakhtigu waxay igu abuurtaa dhibaato. Maalintii si wanaagsan ayay u socotaa, iyadoo fursad loo helayo in la seexdo. Marka ay maqrib iyo habeen tahay, waxaa i haya xanuun badan oo cagahayga ah. Wuxuu u socdaa Celebra iyo Nevrontin isagoo fursad u helay inuu ku buuxiyo Tramadol. U socoshada kaynta iyo beeraha, tababarka xoogga jirka iyo dabaasha barkada biyaha kulul. Waan ka mahad celiyay talo wanaagsan. Dumar, 55 jir
FYI: Faalladan waxaa laga helay adeegga weydiinta Facebook.